Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Mason Mount Childhood Akụkọ gbakwunyere Ihe Na-adịghị Eke Ahụ Eke Ndụ
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye aha ya bụ “Ugwu”Anyị Mason Mount Childhood Akụkọ gbakwunyere akụkọ banyere Untold Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Akụkọ Mason Mount Nwatakiri - Nyocha rue ụbọchị.
Nchịkọta ahụ metụtara ndụ ya, ndụ ezinụlọ, akụkọ ndụ tupu ama ama, okporo ụzọ na akụkọ ama ama, ibute akụkọ ama ama, mmekọrịta, ndụ onwe onye na ụdị ndụ ya wdg.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ tolitere na ọmụma na amamihe nke akụkọ mgbe ochie Frank Lampard.
Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akụkọ ndụ Mason Mount nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ Mason Mount Childhood - Ndụ mbido na Ezinụụlọ:
Malite, aha ya bụ Mason Tony Mount. A mụrụ Mount na ụbọchị 10 nke Jenụwarị 1999 nna ya, Tony Mount na nne ya, na Portsmouth, United Kingdom.
Papa ya yiri ka ọ nọ na mmalite 60s mgbe mama ya yiri ka ọ nọ na ngwụsị 40 dị ka n'oge ederede.
Luke Shaw Ụmụaka Akụkọ Nke Na-adịghị Ekepụta Eziokwu
Ndị nne na nna Mason Mount.
Ezinụlọ Mason Mount sitere na Portsmouth, obodo ọdụ ụgbọ mmiri dị na England amaara dị ka obodo nke abụọ ndị mmadụ bijuju na UK ma makwaara na ha nwere ọdụ ụgbọ mmiri na-ejikwa mkpụrụ osisi kachasị na mba ahụ.
Ejiri ndị ya mara ike ha siri ike na ebum n'uche ha.
Mason Mount Family sitere na ya.
N'ikpe ikpe site na ozi sitere na ọha na eze, ọ dị ka Ugwu abụghị naanị nwa nwoke nne na nna ya.
Eric Dier Ụmụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu Eziokwu
O tolitere na nwanne ya nwanyị nke okenye bụ onye lụrụ nwanyị ugbu a ma binyere di ya n'Australia, ebe ezumike kachasị amasị ndị nne na nna Mount.
Mount si n'ezinụlọ na-ahụ n'anya football na-esite na nzụlite ezinụlọ nke etiti. Papa ya, kama itinye aka n'ịrụ ụgbọ mmiri, malitere ọrụ ịgba chaa chaa na-enweghị mmasị na mgbe e mesịrị, ọrụ nchịkwa nke nyere ezinụlọ ya nri.
Ugwu Snr ma obu Tony (ezigbo aha ya) bụ onye bụbu onye ọkpụkpọ na-agbasaghị egwuregwu nke mechara bụrụ onye njikwa nke Havant Town na Newport.
Na-etolite, nne na nna Mason Mount siri ọnwụ na ọ ga-agụ akwụkwọ n'agbanyeghị na ọ nweghị ịhụnanya na-agwụ ike maka bọọlụ.
O siiri nna ya Tony ike (Mount Snr) ịnagide ezumike nká site na ọrụ ya na-enweghị atụ. O kwere nkwa ịnọgide na-ebi ndụ nrọ ya site na nwa ya nwoke.
Na mbido, Ugwu obi ụtọ nke foto a dị n'okpuru hụrụ onwe ya dị mma nke ukwuu na ọ dara imebi agụmakwụkwọ ya maka ọzụzụ bọọlụ. Onye ọ bụla maara ya n'oge ahụ nwere ike ịhụ na ọ dịrị ndụ ma na-eku ume football.
Ka oge na-aga, ọchịchọ inweta agụmakwụkwọ bọọlụ nọ na-eto n'uche nke Ugwu. Ọ bụ ezie na a ga-ejide ọrụ ọ bụla mgbe ụfọdụ, ịgba bọl na-aga n'ihu.
Mount ga-ejikota nkà ya kwa ụtụtụ, n'ehihie, na mgbede n'ọhịa egwuregwu nke Portsmouth.
Mason Mount Mmụta na Ọrụ Buildup.
Ndị otu ezi-na-ụlọ ya maara na a kara aka ya maka nnukwu ihe dịka ha na-ele ya anya ma dụọ ya ọdụ ka ọ gaa ule.
Oge egbughi oge tupu Mason Mount adaa ọkpụkpọ oku ka ọ bịa ikpe ikpe na Boarhunt FC, agụmakwụkwọ obodo ya. N'oge a, nganga nke nna ya ọ hụrụ n'anya enweghị njedebe.
Akụkọ Mason Mount Biography - Ndụ Ndụ Mmalite:
Mgbe ọ na-egwu bọọlụ n'okpuru-6 dịka afọ anọ maka ọgbakọ ya, ikike Mason dọtara uche nke klọb abụọ kachasị elu bụ Pompey na Chelsea FC.
Ọ bụ ezie na Chelsea bụ onye mbụ hụrụ ya mgbe ọ dị afọ isii, mgbe ọ na-egwu Boarhunt, ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ya.
Ọchịchọ Mount nwere maka football hụrụ ya ka ọ na-agabiga ule agụmakwụkwọ Chelsea ma were ihe nna ya kpọrọ "ihe egwu”Iji sonyere Chelsea mgbe ọ dị afọ isii, na 2005.
Gịnị kpatara ihe egwu? !!. Ọ bụ n'ihi na nna ya dọrọ ya aka ná ntị banyere enweghị mmasị nke Chelsea FC na-agụsị akwụkwọ ndị ntorobịa agụmakwụkwọ ha na ndị otu ha.
Nke a bụ oge ụlọ ọgbakọ ahụ nwetara Roman Abramovich onye nwere mmasị ịzụrụ nnukwu gbaa.
“A dọrọ ya aka na ntị dịka nwatakịrị na John Terry bụ naanị onye ọkpụkpọ gụsịrị akwụkwọ na usoro ntorobịa Chelsea n'ime ndị otu egwuregwu na nso nso a. Mason ji obi ike zaa na ọ ga-abụ onye na-esote ya. ”
Nna Mason Mount kwuru otu oge.
N'agbanyeghị nsogbu nrụgide nke igwu egwu maka ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ, Mount ka gosipụtara mkpebi siri ike maka agụmakwụkwọ ya ka ọ na-aga Purbrook Park School na Waterlooville nke bụ 8 kilomita n'akụkụ ugwu Portsmouth.
Dị ka ụzọ isi nweta mmụọ nsọ na-ezighi ezi n'ime ya na otu egwuregwu mbụ nke Chelsea, obere ugwu jiri ohere ọ bụla o nwere zute akụkọ ifo. John Terry.
Icheta Mason Mount Early Career - Nzukọ Ashley Cole na John Terry.
Mount akwụsịghị ebe ahụ, ka ọ na-etolite, ọ werekwara nkuzi sitere n'ike mmụọ nsọ mụta ihe David Luiz, onye ọkpụkpọ ọzọ nwere echiche enweghị ike inye ya nke ọ na-ewerekwa dị ka arụsị ya.
Ọ maghị na ya na Luiz ha abụọ ga-abụ ndị otu egwuregwu otu ụbọchị.
Mason Mount na - ezute onye otu ya - David Luiz.
Mason Mount Bio - Okporo ụzọ ama ama Akụkọ:
Mount agbagharaghị ọzụzụ na agụmakwụkwọ na Chelsea. Ọbụna ụlọ akwụkwọ emeghị ka ọ kwụsị ilekwasị anya n'ihi na ọ na-arụkarị ihe omume ụlọ akwụkwọ ya ọtụtụ oge na njem 8km dị ogologo gaa ọzụzụ.
Ka Mason Mount gara n'ihu na-eto, ọ hụrụ onwe ya ka ọ na-ebi ndụ nke ọma na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ na-enwe ọganihu dị mma site na ọgbọ dị ka otu n'ime ndị egwuregwu kachasị mma.
Ọ nọ n'etiti ndị ntorobịa agụmakwụkwọ Chelsea mara mma bụ ndị mere akụkọ site na 2015 ruo 2017 mgbe ha buliri iko ndị ntorobịa FA.
Okporo ụzọ Mason Mount Akụkọ.
N'otu oge ahụ, Mason Mount gakwara n'ihu iji merie UEFA Youth League na iko ndị ntorobịa FA ọzọ na oge na-eso ya.
Ọganiihu ọrụ ntorobịa ya mere ka ọ kpọọ ndị England n'okpuru-19 team. Mount gara n’ihu inyere ndị otu U19 ya aka ka ha merie asọmpi asọmpi UEFA European Championship na 2017, inweta ọkpụkpọ ọla edo na otu egwuregwu asọmpi ahụ.
Ugwu Mason- Ebube England nke mbu. Ebe E Si Nweta UEFA.
Mason Mount nwere nrụgide ịnakwere eziokwu ahụ siri ike nke bịara dịka ịdọ aka ná ntị nna ya.
Ọ bụrụ n’icheta, a chọrọ ka ọ mata na John Terry bụ naanị nwata nwoke gụrụ akwụkwọ nke mere nke ọma tinye ya n’òtù egwuregwu mbụ n’ime afọ 20 gara aga.
Ọ dị nwute, agọnarị Mason Mount na ntinye nke mbụ nke mere ka o kpebie iwere nhọrọ mgbazinye ego dịka ọtụtụ ndị otu Chelsea FC mere.
Akụkọ Mason Mount Biography - Na-ewu Onwe Ya Akụkọ:
Mount sonyeere Dutch Eredivisie klọb Vitesse na 24 July 2017 site na mbinye ego oge.
Nanị nkwado ọgbakọ ahụ bụ ihe agbamume maka nwaafọ Igbo na - eto eto Jadon Sancho chere na ọ dị mkpa igosipụta ọdịbendị ọhụrụ, usoro ọzụzụ na omume na mba ọzọ.
Ugwu Mason gbagoro na Vitesse. Ebe E Si Nweta ESPN.
Mason Mount nwere mmetụta ozugbo na klọb ahụ dị ka onye mbido egwuregwu mbụ. N’afọ mbụ ya, enyere ya ọkpụkpọ Vitesse nke oge 2017-18.
Imeri onyinye a masịrị onye nlekọta mbụ Derby na akụkọ akụkọ Chelsea Frank Lampard onye nọ n’oge ahụ n’agha iji buso ndi na-eto eto Chelsea agha na Derby.
Ọ bụ ezie na ọgbakọ klọb ndị ọzọ kachasị elu dị ka Ajax, PSV Eindhoven gosipụtara mmasị, Mount kpebiri inye Derby mbinye aka ya na onye na-enye ndụmọdụ, Frank Lampard.
Ọ masịrị oge ya na Rams ma bụrụ onye isi na-enyere ndị klọb aka ị nweta mmeri n'ọkwa egwuregwu. Lampard nyere ya ọzụzụ n'ụdị ọ nakweere n'oge otuto ya na Chelsea.
N’oge a, Ugwu ghọrọ onye ọ hụrụ n’anya ihe ya masịrị ya.
Mason Mount- Lampards Onye m hụrụ n'anya nke ihe ya masịrị ya.
Mason Mount hụrụ ọpụpụ Lampard na Chelsea dị ka ohere kachasị mma ịlaghachi na klọb nna ya ma gosipụta na ọ ga-eme ya na otu egwuregwu mbụ.
Nanị ụzọ iji gosi na nke ahụ bụ ịnwe oke oge 2019. Ngosipụta ngosi nke Mount n'oge 2019 preseason mere ka ndị na-akwado Chelsea kwenye ihe ọhụrụ Frank Lampard abiala n'ọdụ ụgbọ mmiri.
Marcus Rashford Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
Ugbu a dị ka n'oge ederede, Mount na-ebi ndụ kwekọrọ na atụmanya ya dị ka a hụrụ na ikike ya ịme nnukwu ihe mgbaru ọsọ ma mee ka ndị egwuregwu kachasị na nnukwu klọb jiri ikpere ya gbuo ikpere n'ala.
Ugwu Mason Rise to Akụkọ.
O doro anya na Mason Mount egosila ụwa na ọ bụ nkwa mara mma na-esote ọgbọ nke Bekee n'etiti Frank Lampard. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Ndụ Mason Mount Life na Chloe Wealleans-Watts:
Site na ịrị elu ya na ama ama, ajụjụ a na-aza onye ọ bụla na-akwado Chelsea; Onye bụ Mason Mount's Girlfriend?….
Agaghị agọnahụ eziokwu ahụ na ọmarịcha mma ya na ụdị egwuregwu ya agaghị eme ka ọ bụrụ enyi nwanyị.
Agbanyeghị, n'azụ ụdị onye ọkpụkpọ egwuregwu na-aga nke ọma, enwere WAG na-adọrọ adọrọ na onye mara mma nke Chloe Wealleans-Watts nke e sere n'okpuru ebe a na enyi ya nwoke.
Mason Mount na enyi nwanyị- Chloe Wealleans-Watts. Ebe E Si Nweta IG.
Na-ekpe ikpe site n'ọtụtụ post ha na mgbasa ozi mmekọrịta, ọ dị ka ndị hụrụ ha n'anya siri ike mmekọrịta nke e wulitere na ọbụbụenyi.
Lovehụnanya ahụ na-ekerịta n'etiti Mount na enyi nwanyị ya bụ Chloe Wealleans-Watts na-agbanahụ nyocha nke ọha na eze naanị n'ihi na ndụ ịhụnanya ya na-enweghị ihe nkiri.
Eziokwu ahụ bụ na ndị hụrụ ya abụọ esoro nwa oge na-eme ka o doo anya na agbamakwụkwọ nwere ike ịbụ nzọụkwụ ọzọ.
Mason Mount Bio - Ndụ Nke Onwe:
Tomara Mason Mount Personal Life ga enyere gị aka ịmata onye ọ bụ.
Mason Mount hụrụ ihe abụọ n'anya; nke mbu, ibu onye oru, na nke abuo, ijikwa oge ya. O nwere nnwere onwe dị n'ime ya nke na-enyere ya aka inwe nnukwu ọganihu ma na ndụ ya na nke ọkachamara.
Ugwu nwere nkwenye onwe onye a dị ukwuu yana ikike ịme atụmatụ siri ike na ezi uche maka ndụ ya.
Eziokwu Mason Mount Personal Life. Ebe E Si Nweta IG na Twitter.
N'adịghị ka ọtụtụ ndị ọgba bọọlụ na-eto eto, Mount ekwenyeghị na ịzobe ọnọdụ mmekọrịta ya ka ọ na-emeghe maka ụwa mara onye enyi ya nwanyị bụ yana ndị mụrụ ya.
Ọ mụtala site na mmejọ nke ndị na-eto eto ndị ọzọ na-eto eto ma dị njikere mgbe niile ịme ka ọ mara ọkachamara mgbe ọ dị mkpa.
Ndụ Mason Mount Family:
Mason Mount na-e hisomi ndị nne na nna ya mara mma na ndị na-arụsi ọrụ ike n'obodo ya Portsmouth, England.
Taa, nne ya, nna ya, na nwanne ya nwanyị na-erite uru dị ugbu a n’inwe mmụọ iche echiche ahụ siri ike ma ghara inye ya n’ime ya.
Nna Mason Tony AKA Mount Snr kwenyere na nzụlite nwa ya nwoke nke Portsmouth na nzụlite enyela ya aka na mbido ọrụ ya site na mbido ọrụ ya.
Mason Mount na Nna ya.
“You gaghị eleghara ọgụ Portsmouth na ya anya, agbanyeghị! Ekwesịrị m ikwu na Mason bụ onye na-agba ara Pompey ka na-agba agba, ezinụlọ ya niile nọ “.
Tony Mount, nna ya kwuru.
Banyere mama Mason Mount:
N'adịghị ka di ya, nne Mason Mount ekpebiela ịghara ịchọ otuto ọha.
Ọ bụ ikekwe onye na-elekọta ụlọ nke na-adịghị etinye onwe ya na football, na-ahọrọ ndu nzuzo na nke nkpirisi.
Mason Mount na ndị nne ya.
Mason Mount LifeStyle:
Ee, ihe ịga nke ọma ya na-enwe na ego dị ka egwuregwu ọ na-agbacha. Dị ka n'oge edere, ekweghị Mason Mount ibi ụdị ndụ okomoko dịka imefu ego dị ka onye nzuzu, ịzụ ụgbọala mara mma, ma ọ bụ gbanwee ụzọ ndụ ya.
Eziokwu Mason Mount LifeStyle. Ebe E Si Nweta The Telegraph.
Gwọ ọnwa Mason Mount nke mụbara kemgbe emeghachitere nkwekọrịta ya nke 2019 agbanweghị ka ọ bụrụ ụdị ndụ na-adọrọ adọrọ. Agbanyeghị, o nwere ụzọ ọ ga-esi nweta ihe niile ọ choro n’ime ụlọ, dị ka ọmarịcha ịsa ice ya.
Mason Mount LifeStyle.
Eziokwu Mason Mount:
Enyi ya kacha mma: Enyi na enyi abia la. Mana e nwere ndị ọbụbụenyi ndị ahụ na-eguzosi ike. Ezigbo ezigbo ihe atụ bụ karịa afọ 13 nke ọbụbụenyị kesara n'etiti Mason Mount na Chora Ohia.
Mason Mount Untold Eziokwu- Ọbụbụ Enyi Ya dị ogologo.
Dịka e kwuru n'elu, ha abụọ bụ ndị ọgba bọọlụ na-aga nke ọma ma nwee ọtụtụ ihe jikọrọ kemgbe ha bụ nwata. Ha na ndi enyi ha nwanyi na emefu ezumike ezumike, ihe akaebe iji gosiputa ike nke enyi ha.
Mason Mount na Declan Rice- Akụkọ Enyi.
Thingszọ ihe na-aga, onye maara, ma eleghị anya akara aka ga-ewetara ha klọb na otu egwuregwu otu ụbọchị.
Akụkọ Mason Mount Child's Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ - Video Nchịkọta
Biko chọta n'okpuru ebe a, vidio vidio YouTube maka profaịlụ a. Obiọma Gaa na Ndenye aha anyị Youtube ọwa, wee pịa Amaokwu Bell maka Ịma Ọkwa.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Mason Mount Childhood Akụkọ ya na Eziokwu Untold Biography. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Nwere ike 20, 2021